बैंकहरुमा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै तरलता थुप्रिए
आर्थिक बैंकहरुमा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै तरलता थुप्रिए
२०७७ असार २७ | यतिबेला बैंकहरुमा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै तरलता थुप्रिएको छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम अभाव होइन, अत्यधिक भएको छ ।
लकडाउनपछि भने अवस्था ठीक विपरीत भएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले ११ चैतमा पूर्ण लकडाउन गर्यो । लकडाउनको अवधिभर कर्जा लगानी अत्यन्तै कम भयो । सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै १ असारदेखि केही सहज बनाएको छ ।
तर, यस अवधिमा पनि कर्जा लगानी बढ्नुको सट्टा घटेको छ । कर्जा लगानी यसरी सुस्ताउँदा बैंकहरुमा अधिक तरलता भएको हो ।
अधिक तरलता हुँदा के हुन्छ ? त्योभन्दा पहिले बैंकमा भएको निक्षेप तथा कर्जाको ताजा अवस्था हेरौँ ।
‘लगानी गर्ने वातावरण नै छैन, कसरी बढ्छ कर्जा ?’
पूर्ब बैंकर अनलराज भट्टराई लगानी गर्ने वातावरण नभएका कारण अहिले बैंकको कर्जा लगानी सुस्ताएको बताउँछन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण लगानी गर्ने वातावरण पुरै बिग्रिएका कारण यतिबेला बैंकको लगानी नभएको र लगानी नहुँदा अत्यधिक तरलता थुप्रिएको उनले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले त तनान्ने बरु बैंकलाई नै लगानी बढाउन दबाव दिने नीति बनाएको छ नि ?’ भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘लगानी त विस्तारै बढिहाल्छ, तर तरलता त राष्ट्र बैंकले तान्नैपर्छ, राष्ट्र बैंकका अधिकारीले जिस्केर तान्दैनौं भन्नुभएको हुन सक्छ, साँच्चिकै होइन ।’
यो चालु आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा धेरै भएकोे राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । लकडाउनका कारण बैंकिङ लगानी घटेपछि बैंकहरुमा अधिक तरलता देखिएको प्रवक्ता भट्टले बताए । यस वर्षकै धेरै तरलता हुनुको कारण सरकारी खर्च बढ्नु पनि भएको उनले बताए ।